အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ဖူးပွင့်ဝေစီ ပန်းစုံညီ
မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ ရာသီချိန်ခါပန်း ဖြစ်တာကြောင့် မကြိုက်သူ နည်းပါးလှပြီး မွှေးကြိုင်လွန်းတဲ့ သင်္ကြန် မင်းသမီးလေးကတော့ ဝင်းဝါနေတဲ့ ပိတောက်ပန်းဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးစာဆိုများကပင် ကဗျာတွေ စာတွေ တကူးတကရေးဖွဲ့ရလောက်အောင် ထူးထူးခြားခြား ပွင့်တတ်တဲ့ ပန်းမျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အပင်ကြီးမျိုးဖြစ်ပြီး မြန်မာတွေ တန်ဖိုးထား နှစ်သက်ကြတဲ့ ပိတောက်ပန်းခေါ် Gumkino flower ဖြစ်ပါတယ်။
ကြက်မောက် အနွယ်ဝင် ပန်းများအားလုံးကို amaranth flower ပန်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။
ပန်းမဟုတ်ဘဲ အရွက်သက်သက်သာဖြစ်သော်လည်း သပြေပန်းရယ်လို့ ခေါ်ဆိုကြပြီး ကျွန်မတို့မြန်မာလူမျိုးတို့ အသုံးများတဲ့ ပန်းဖြစ်ပါတယ်။ ယတြာခြေခြင်းအတွက် လူအများ အသုံးပြုခြင်း များပြားပြီး ဘုရားတွင်ရောင်းသော ပန်းဆိုင်တိုင်းမှာ မပါမဖြစ် ပန်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သပြေ အမျိုးအစားပေါင်း များစွာ ရှိရာ အပွင့်ပွင့်သော သပြေရှိသကဲ့သို့ အပွင့်ပွင့်ပြီး အသီးသီးသော သပြေပင်ကြီးမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ သပြေပန်းအား အောင်မြင်ခြင်း အထိမ်းအမှတ်ပန်းလို့လည်း သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
ဆောင်းရာသီမှသာ နှင်းရည်စိုလူး ပွင့်ဖူးဝေဆာတဲ့ ပန်းခွာညို ဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းတွေမှာ ထည့်သွင်းသီဆိုရတဲ့ မောင့်မြခွာညို ဆိုတဲ့ ခွာညိုပန်းဟာ ခုလို အညိုရောင်ပန်းကလေး ဖြစ်ပါတယ်။ အနံ့လေးက စိတ်ကြည်နူးချမ်းမြေ့ဖွယ် ကောင်းလောက်အောင် မွှေးကြိုင်တဲ့ ချစ်စရာ ခွာညိုပန်းဟာ Clematis smilacifolia လို့ အမည်ရပါတယ်။ ငါးစီးရှင်ကျော်စွာ ရေးဖွဲ့ခဲ့သော ရှေးခေတ် ကာချင်းတစ်ပုဒ်တွင်လည်း ခွာညိုပန်း အကြောင်း ထည့်သွင်းရေးဖွဲ့ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ပင်ခြေချုံထက်နွယ် ချုံထက်နွယ် ။
ကင်ပုန်းပွင့်ချီချယ် ပွင့်ချီချယ် ။
နွယ်ပန်း ခွာညို ၊ ပွင့်ပေလို
အလွန်ချစ်စရာကောင်းပြီး နူးညံ့တဲ့ အဖြူရောင်ပွင့်ချပ် လိမ္မော်ရောင် အရိုးကလေးနဲ့ ဆိတ်ဖလူးပန်းဟာ ကျွန်မ အနှစ်သက်ဆုံး ပန်းကလေးလဲဖြစ်ပါတယ်။ ညဘက်တွေမှာ ပိုမွှေးလို့ Night Jasmin လို့ ခေါ်ဟန်တူသလို ရိုးတံလေးက နီတျာတျာလေး ရှိပြန်တော့ Coral Jasmin လို့လည်း ခေါ်ကြပြန်တယ်ထင်ပါရဲ့ရှင်။ ဆိတ်ဖလူးပန်းကလေး မြင်လိုက်တော့ ငယ်စဉ်ကပင် နှစ်သက်စွာ ရွတ်ဆိုခဲ့ဖူးတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်သော ဆရာကြီး ဗန်းမော်ညိုနွဲ့ရဲ့လက်ဖက်ရည်ကြမ်းဝိုင်း ကဗျာလေးကို ပြေး သတိရလိုက် မိပါသေးတယ်။
ရွှေစက် ရွှေပြောက်၊ ရွှေရည်သောက်၏။
တရံတခါ ၊ လေအလာတွင်
ရွာလယ်ပေါင်းကူး ၊ တံတားဦးမှ
ဆိတ်ဖလူးနံ့ ၊ ရွာလုံးပျံ့၏။
ပင်လုံးကြိုင်ပင်ရှိရာ အိမ်ရှေ့မှ ဖြတ်သွားလျှင် လမ်းတစ်လျှောက်လုံး မွှေးပျံ့နေသော ရနံ့ကို စိတ်ကြည်နူးဖွယ် ရရှိနိုင်ပါတယ်။ တရုတ်ပြည်တွင် ၄င်းပန်းများကို အခြောက်ခံထား၍ ဖျော်ရည်လုပ်သောက်ခြင်း၊ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းအဖြစ် သောက်ခြင်းများကို အသုံးပြုကြပါတယ်။
ထူးထူးခြားခြား လရောင်ဆန်းချိန် ညသန်းကောင်ကျော်မှ ပွင့်တဲ့ ပန်းဖြစ်တာကြောင့် ကုမုဒြာရယ်လို့ ခေါ်ကြတဲ့ ရှားစောင်းမျိုးနွယ် Dutchman's pipe Cactus ပန်းဖြစ်ပါတယ်။ ပွင့်ချိန်မှာ အနံ့လေးက သင်းသင်းလေး မွှေးပါတယ်.. မနက်ရောက်ချိန်မှာ ညှိုးသွားတတ်တာကြောင့် ပွင့်တာကို မြင်တွေ့ရဖို့ ခဲယဉ်းတယ်လို့ ဆိုကြတာကြောင့် မြင်တွေ့ဖူးသူ နည်းပါးမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
စကားဝါပန်း ဆိုတာကတော့ ကျွန်မတို့မြန်မာပြည်မှာ အထူးထင်ရှားတဲ့ ပန်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ ရှေး ပုဂံခေတ် ကဗျာဖြစ်တဲ့ ရွှေနှင့်ယိုးမှား ပန်းစကား ဆိုတဲ့ ကဗျာမှာတောင် စကားဝါပန်းကို ထည့်သွင်းရေးဖွဲ့ထားခဲ့ပါတယ်။ ရွှေနဲ့ တင်စားရလောက်အောင်ဘဲ ဝင်းဝါလှပ စိုပြေတဲ့ အရောင်အဆင်း ရှိပြီးတော့ ဘုရားအိုးမှာ ထိုးထားရင် တစ်အိမ်လုံးကို အနံ့က သင်းပျံ့ ကြိုင်လှိုင်နေတတ်ပါတယ်။ စကားဝါ နဲ့ စကားပန်းအဖြူရောင်ရယ်လို့ ရှိပေမဲ့ စကားဝါပန်းက ပိုပြီး မွှေးပါတယ်။ စကားဝါပင်မှာ ပန်းပွင့်နေတဲ့အချိန် ပေပေါင်းများစွာ အဝေးကနေတောင် သူ့အနံ့ကို ရနိုင်လောက်အောင် မွှေးရနံ့ ပြင်းထန်တဲ့ ပန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကြီးတဲ့ ကမ္ဘာကျော် Joy ရေမွှေးဟာ ဒီစကားဝါပန်းနဲ့ ဖော်စပ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အပေါ်က ပန်းကို စကားပန်းလို့ ခေါ်တဲ့အတွက် ဒီပန်းကိုတော့ ပြည့်စုံအောင် တရုတ်စကားပန်းလို့ ခေါ်ရပါမယ်။ အနီရောင် အဖြူရောင် စသဖြင့် ရှိပြီးတော့ ရနံ့က မွှေးပါတယ်။ ကြိုက်တတ်သူများကတော့ အပွင့်ကို ပြုတ်ပြီး သုပ်စားကြပါသေးတယ်။ Plumeria (a) Frangipani စသဖြင့် ခေါ်ဆိုပါတယ်။ တရုတ်စကားပန်းဟာ နိုင်ငံအလိုက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အဓိပ္ပါယ် အသီးသီး ရှိပြီး တရုတ်ပြည်မှာတော့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ပန်းလို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဟာဝိုင်ရီမှာကတော့ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်တဲ့ သဘောလို့ ဆိုပါတယ်. ဒါကြောင့်လည်း ဟာဝိုင်ရီက မမတွေ တရုတ်စကားပန်းလေး အမြဲတမ်း သုံးတတ်ကြတာ ထင်ပါတယ်။
စွယ်တော်ပန်း - Hong Kong Orchid Tree Flower
Hong Kong Orchid Tree Flower လို့ အမည်ရတဲ့ စွယ်တော်ပန်းပါ။ စွယ်တော်ရွက်ဟာ အသည်းပုံသဏ္ဍာန် ရှိတာကြောင့် နှစ်လွှာပေါင်းမှ တစ်ရွက်ရယ်လို့ တင်စားကြပါတယ်။
အပေါ်က အဖြူရောင်စွယ်တော်ပန်းကိုတော့ Snowy Orchid tree flower လို့ခေါ်ပါတယ်။ ရှမ်းပြည်မှာတော့ စွယ်တော်ပန်းကို ပြုတ်ပြီး သုပ်စားကြပါတယ် ။ အရွက်နုလေးကိုလည်း ကြော်စား၊ ဟင်းချိုချက်စားကြပါတယ်။
နွယ်ပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အပွင့်ပုံစံက မြတ်လေးပန်းနဲ့ ဆင်ဆင်တူသော်လည်း အနီ၊ အနီဖျော့၊ အဖြူရောင် စသဖြင့် အရောင်စုံတဲ့ Rangoon Creeper ခေါ် ထားဝယ်မှိုင်းပန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူကများ Rangoon လို့ပါအောင် ပေးခဲ့တယ် မသိပါဘူးရှင်.. ယခင်က ရန်ကုန်ကို အင်္ဂလိပ်လို စာလုံးပေါင်းတဲ့ အသုံးအနှုန်းဖြစ်လေတော့ စိတ်ဝင်စားမိရပါတယ်။
မဟာဗုဒ္ဓဝင်မှာ မပါမပြီးဖြစ်တဲ့ အင်ကြင်းပန်းဖြစ်ပါတယ်။ သစ်ကိုင်းကနေ ပွင့်တာမဟုတ်ဘဲ ပင်စည်ကနေ ပွင့်တတ်တဲ့ ပန်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Shorea Robusta flower လို့ ခေါ်ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ မယ်တော်ဟာ အင်ကြင်းပင်ကိုမှီပြီး မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်သလို ဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန် စံဝင်တော်မူချိန်မှာလည်း အချိန်အခါမဟုတ်ဘဲ အင်ကြင်းပန်းတွေ ဖူးပွင့်ကြတယ်လို့ ဗုဒ္ဓဝင်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဂျင်းမျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ အပင်ကနေ ပွင့်တာကြောင့် ရွှေငွေပန်းကို White Ginger လို့ ခေါ်ပါတယ်။
မိုးရာသီမှာ ရေကန်စပ်များ၊ ရေဝပ်ရာနေရာများတွင် ဖူးပွင့်တတ်သော ခတ္တာပန်း Crinum asiaticum (a) Poison Bulb ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပန်းဟာလည်း မိုးရာသီမှာ ပွင့်တတ်တဲ့ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး သေးသေးသွယ်သွယ် ပန်းကလေးဖြစ်ပါတယ်။ ပွင့်ချပ်များမှာ ဖယောင်းသားကဲ့သို့ နူးညံ့လှပြီး ဝတ်ဆံဝါများမှာ အလွန်မွှေးကြိုင်တာကြောင့် ပျားပိတုန်းတို့ ရစ်ဝဲခြင်း ခံရတဲ့ပန်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပုန်းညက်ပန်းရယ်လို့ နာမည်လှလှလေးကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး Calophyllum inophyllum လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အာရှနဲ့ သြစတြေးလျားမှာ ပေါက်ရောက်တဲ့ အပင်ဖြစ်ပါတယ်။
မသိသူ မရှိတဲ့ ခရေပန်းဖြစ်ပါတယ်။ အပင်ပေါ်မှာရော ကြွေသွားပြီး မြေပြင်ပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပါ မွှေးပျံ့နေဆဲ ပန်းဖြစ်တာကြောင့် ကြွေလဲမွှေး ဝေလဲမွှေး ရယ်လို့ တင်စားကြပါတယ်။
ပန်းမဟုတ်တဲ့ အရွက်ပင်ဖြစ်သော်လည်း ဒေါနပန်းလို့ ခေါ်ကြတဲ့ အနံ့မွှေးသော အရွက်တစ်မျိုးပါ. ကျွန်မတို့ ငယ်စဉ်ကတော့ အုန်းဆီထဲကို အနံ့မွှေးအောင် ထည့်ပြီး လိမ်းကြပါတယ်။
ဒေါနပန်းကို မြင်ရတော့ လေးမောင့်စံကျောင်း ကဗျာထဲက
မုလေးရုံ တောအစ၊ ဒေါနလမ်း မြေညီ
ဆိုတဲ့ အပိုဒ်ကို သတိရမိပါသေးတော့တယ်။
ပန်းအခေါ်အဝေါ်အား ကွဲလွဲချက်များ၊ များယွင်းခြင်းများ ရှိခဲ့ပါက ကျွန်မရဲ့ လိုအပ်ချက်ကြောင့်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းများ ကူညီရှာဖွေပေးသော သူငယ်ချင်းများအား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ ပိတောက်ပန်းပုံများနှင့် အချို့ပန်းပုံများကို ဒီနေရာ မှ အသုံးပြုထားပြီး ကျန်သော ပုံများအား Google မှ ရှာဖွေ အသုံးပြုပါတယ်။ ဒီပိုစ့်လေးသည် တစ်စုံတစ်ဦးအတွက်ဖြစ်စေ၊ အနည်းငယ်မျှဖြစ်စေ အသုံးဝင်သွားခဲ့မယ်ဆိုလျှင် မွှေနှောက် ရှာဖွေရကြိုး နပ်ပါပြီရှင်..
ချစ်မိတ်ဆွေများအားလုံး ရေလိုအေး၍ ပန်းလို မွှေးပျံ့နိုင်ကြပါစေရှင်..
33 Responses to “ဖူးပွင့်ဝေစီ ပန်းစုံညီ”
ဘုရားခန်းကအထွက် အွန်လိုင်းပေါ်တက် ပို့စ်အသစ်တွေကိုလိုက်အဖတ် ချောရဲ့ ပန်းပေါင်းစုံကို မြင်လိုက်ရတာ မင်္ဂလာရှိလိုက်တာ။ မမြင်ဘူးသေးတဲ့ပန်းတွေအကြောင်းလည်း သိသွားပြီ။ ကျေးဇူးပါနော်။
Thank you Chaw for sharing, I really don't know how to call most of the flowers in Eng!
ပန်းလေးတွေက လှလိုက်တာ မချောရေ...း))
ချောရေ.. မွှေးလိုက်တာ... အေးချမ်းလိုက်တာ...
တစ်ကယ်..ရုံးမှာထိုင်နေရင် အနံ့လေးတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု သင်းလာသလို ခံစားရတယ်သိလား..
ပန်းနာမည်တော်တော်များများကိုမသိတာ နဲ့ အတော်ပဲဖြစ်သွားပါတယ် မချောရယ် ဝေမျှပေးတာကျေးဇူးပါနော်..။
ယုဇနပန်း ၊ နွယ်သာကီပန်း ခွာညို ၊ ပင်လုံးကြိုင် စံကားဝါ ၊ ခေတ္တာ ပန်းတို့ဆိုရင် တစ်ခါမှကိုမမြင်ဖူးဘူးရယ်..။
ပုဏ္ဏရိတ်ပန်း ကိုကျတော့ ရွှေတဆုပ်ပန်းလို့ခေါ်ပါတယ်..
မြန်မာအခေါ်အဝေါ်တွေကိုသိပေမယ့် ရခိုင်အခေါ်အဝေါ်တွေနဲ့မတွဲမိဘူး .ဝေမျှပေးတာကျေးဇူးပါနော် အမ..။
ကျေးဇူးပဲချောရေ..ပန်းတွေကို အပင်ပန်းခံပြီး တော်တော်စုံစုံလင်လင်ရှာဖွေတင်ပေးထားတယ်...။ အဲဒီပန်းတွေအကုန်လိုလို ကျောင်းတုန်းကသင်ဖူးတယ် ပရက်တီကယ်လုပ်ဖူးတယ် မိုင်နာထဲမှာပါနေလို့လေ...။ ကြက်မောက်နွယ်ဝင် တွဲလောင်းကျနေတာက ကြောင်မြီးပန်းခိုင်ဆိုပြီး ဆရာမတွေပြောတယ်...။ Magnolia ကို စကားပန်းအုပ်စုထဲကလို့ပဲသိထားတာ တတိုင်းမွှေးပန်းမှန်းခုမှသိတယ်....။ ခရေပန်းပွင့်က အပင်ပေါ်မှာပိုလှတယ်...။ ပန်းတွေအကုန်ကြိုက်တယ်.....။
Thank you sis for sharing this knowledge. I feel that I get the scent of all flowers :))
FYI, ပိတောက် can also called Angsana.
ယုဇနပန်း နဲ့ ဇီဇ၀ါကို အရောင်ရော အနံ့ ရောသိပ်သဘောကျတယ်။
ပန်းပုံလေးတွေ တွေ့ တော့မြန်မာပြည်ကို လွမ်းသွားတယ်ချောရေ။
Nenad Vučković said...
မချောရေ အချိန်တွေအများကြီးပေးပြီး အပင်ပမ်းခံပြီးရေးထားတာ ကျေးဇူး။
သနပ်ခါးပန်းလေး၊ ခွာညိုပန်း၊ ယုဇနပန်း အကုန်မပြီးသေးဘူး၊ ရေးချင်လို့ comment အရင်ရေးတာ။
share မယ်နော် fb မှာ
ပြီးရင်ပြန်လာဖတ်မယ် ခု အလုပ်နည်းနည်းရှိ
အိမ်ကို လွမ်းလိုက်တာ ချောရယ်း(
ဆိတ်ဖလူးပန်းတွေ ကောက်ပြီး သီနေတတ်တယ်
ဇီဇ၀ါ ပန်းလည်း ကြိုက်တယ်။ ခွါညိုပန်းရော
သနပ်ခါးပန်းနဲ့ ယုဇနပန်း အိုး အားလုံးကြိုက်တယ်
စကားပန်းကလွဲရင် အိမ်မှာ အကုန်လုံးရှိတယ် ဒီပန်းတွေ
ကန့်ကော်ကိုတော့ မွှေးလို့အကြိုက်ဆုံးပဲ။ :)
ပန်းလေးတွေကို Download လုပ်သွားပါတယ်ရှင်
တချို့ မသိသေးတဲ့နာမည်တွေကိုသိခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်
အော်....ပန်းပန်း....ပန်းဆိုတာ မြေပေါ်ပေါက်တတ်တာပါလားနော် :P ပန်းပုံလေးတွေ ကြည့်သွားတယ် အစ်မချောရေ.....
ပန်းတွေလည်း လှပါသည်၊ မချောလည်း လှပါသည်၊
ဖတ်ရင်းနဲ့ အနံတွေတောင် ရလာသလိုဘဲ သရဖီ ပန်းလေး ပါသေးဘူးနော် ငယ်ငယ်က မေမေ က သရဖီ ပေါ်ချိန်မှာ ပန်းလေးပန်ပေးပြီး သနပ်ခါးတွေ ဖွေးနေအောင် လိမ်းပေးတာသတိရတယ်
ပန်းလေးတွေ ကြည့်ရတာ အရမ်းစိတ်ချမ်းသာပါတယ်။ ပန်းက လူကို ရွှင်လန်းအေးမြစေတယ်နော်။
ဒါပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ လိုက်မမှတ်တော့ဘူးနော်။ မှတ်ရ ခက်လွန်းလို့။း))))
တချို့ပန်းတွေဆို နာမည်နဲ့ ပုံနဲ့ တွဲမသိဘူး ဖြစ်နေတာ ဒီပို့စ်လေး ဖတ်မှပဲ မှတ်မိသွားတော့တယ်၊ သဘောကျ တာက ထားဝယ်မှိုင်းပဲ..၊ မြန်မာလိုတော့ 'ထားဝယ်'..၊ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ 'ရန်ကုန်' တဲ့၊ ဒါတောင် Rangoon လို့ ပေါင်းထားသေးတယ်၊ ဟိုလူကြီးတွေ မြင်ရင် Yangon လို့များ အတင်းပြောင်းနေဦးမလား မသိ..၊း) စုံစုံစေ့စေ့နဲ့ ရှာဖွေ ဝေမျှပေးလို့ ကျေးဇူးပါပဲ မချောရေ...။
ဆိတ်ဖလူးပန်း ၊ ဇီဇ၀ါ ၊ စကားဝါပန်း ပြီးတော့
ကုမုဒြာ အဲဒီပန်းတွေကို တော်တော်လေးကို ချစ်တာ.
ပန်ဖို့ဟုတ်ဘူး အပင်မှာပွင့်နေတာကို ကြည့်နေရတာကိုက ကြည်နူးနေတာ..
ဆိတ်ဖလူးပန်းတွေဆို မြေပြင်မှာ ကြွေကျနေပြီဆိုရင်
ငယ်ငယ်လေးထဲကကို အဲလိုကြည့်ရတာ နှစ်သက်တာ.
တစ်ခါမှတော့ ပန်းမပန်ဘူး. ပြီးရင် ပန်းလာခူးတဲ့ လူရှိလဲ စိတ်ဆိုးသေး.. ငယ်ငယ်ကပြောတာပါ..
ကျေးဇူးမချောရေ..ဒီနေ့အဖို့တော့ ပန်းပေါင်းစုံမွှေးပျံ့ လို့ စိတ်နှလုံးသာယာသွားတယ်..
ပန်းရနံ့လေးတွေ ကူးစက်သွားတယ်။ အေးချမ်းသွားတာပဲမချော။ မသိသေးတဲ့ အမည်တွေလည်း သိရပြီ။
ကြည့်ရတာ ရင်ထဲမှာ အေးသွားပြီး
ဟိုးအရင် အိမ်မှာ စိုက်ခဲ့ဖူးတာတွေ
သနပ်ခါး ပင် ပေါ့ ..
ပိတောက်လိုပဲ သင်္ကြန်ပန်း တစ်မျိုးပဲ ..
သင်္ကြန်ဆို ပိတောက်နဲ့ တူတူ အပြိုင်ပွင့်တယ် ..
အဲ့ဒီ့ စကားဝါပန်းကို ဖက်နဲ့ထုပ်
ပြီးရင် သင်္ကြန်ကားပေါ်တင် ..
ပြီးရင် ကားတွေပေါ်ကနေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပေးတာတွေ ရှိတယ် ..
မွှေးပျံ့တဲ့ ပန်းရနံ့တွေကို လွမ်းသွားမိတယ်၊
တချို့ ပန်းနာမည်တွေကို မှတ်ထားလိုက်တယ်၊
ကျနော်နော့် ..........ဆိတ်ဖလူးပန်း - Night Jasmin ( a) coral jasmine လေးတွေကို အချစ်ဆုံးပဲ အငယ်တုန်းက ခေါင်းရင်းခြံမှာ အဲ့ပန်းရုံကြီး ပွင့်ပွင့်နေတာ ညဘက်ကျ သိပ်မွှေးတာပဲ ချစ်စရာလေးတွေ ။
မချောရေ ပန်းတွေအားလုံးကို သဘောကျစွာ ကြည့်ရှုခံစားလိုက်မိပါတယ်။ တစ်ချို့ပန်းတွေကို တွေ့ဖူးမြင်ဖူးနေပေမယ့် နာမည်မသိဘူးရယ်။ ခု ချောပြောပြမှပဲ သိတာ။ ဘုန်းဘုန်းတို့ရွာကျောင်းအရှေ့ဘက်က စကားဝါပန်းရှိပြီး အနောက်ဘက်ကတော့ စကားဖြူရှိတယ်။ စကားဝါကို ပုလင်းထဲထည့်ပြီး ရေနဲ့၊ ပြီးတော့ မပုပ်အောင်လို့ ကျောက်ချဉ်ဆိုလား ဘာဆိုလား ထည့်သေးတယ်လေ။ ပြီးရင် ဘုရားစင်ပေါ်မှာ တင်လှူထားကြတယ်။ ချောတို့ဘက်မှာကော အဲဒီလို မလုပ်ဘူးလား။
မမချော... ကျေးကြူးကမ္ဘာဆိုင် ....
ရွှေမြို့က ပန်းခွာညို စာဆိုနှင့်ပေး
စာဆိုနဲ့ ခွာညိုပန်းရယ် နန်းမြေထိမွှေး
Banyar Nwet said...
မချောခင်ဗျား ကျွန်တော်၏facebookစာမျက်နှာထက်တွင် Credit: ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)မအည်ဖြင့် ကူးယူဖော်ပြခွင့်ပြုပါရန်လေးစားစွာခွင့်တောင်းအပ်ပါသည်.....
ကျွန်တော့်ရဲ့fb pageမှာ ပြန်shareချင်လို့ပါ